Hanome anao indray ny fahafahana tany ampiandohana | Fondation des Choisis de Jésus
Hanome anao indray ny fahafahana tany ampiandohana
1C_38: R’ilay Bitikako, omeo Ahy hatrany ny fahorianao. Ho lasa fahoriako ireny ary tsikelikely dia halana aminao ireny. Tsy ho tsapanao intsony ireny. Dia ho lasa olona afaka tanteraka ianao, satria lasa Fitiavana ianao. Ny Fitiavana no hanome anao indray ny fahafahana tany ampiandohana izay nesorin’ny fahotana taminao.